घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू जेरार्ड डीलुफू बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जेरार्ड डीलुफू बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य। प्रिमियर लिग र इन्स्टाग्रामको क्रेडिट
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गर्दछ "प्रदायक"। हाम्रो Gerard Deulofuu बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म।
जेरार्ड डुलौफू बचपन स्टोरी - यो विश्लेषण। चहचहाना, टेलिग्राफ र प्रिमियर लिगमा क्रेडिट
विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / क्यारियर बिल्डअप, प्रारम्भिक क्यामेरा जीवन, प्रसिद्धि कथाको लागि बाटो, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन र जीवन शैली तथ्याङ्क आदिमा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उहाँ केवल छिटो हुनुहुन्न, तर एक राम्रो खेलाडीले राम्रो प्रविधिको साथ भित्ता, क्षमताहरू र लक्ष्यको लागि आँखा देखाउछ।
सबैले जेरार्ड डुलौफुको बारेमा के थाहा छ। प्रिमियर लीग को क्रेडिट
यद्यपि, फुटबल प्रशंसकहरूको केहि मात्र जरिर्ड डीलौफु जीवनीको बारेमा धेरै थाह छ जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
गारर्ड डेल्भौउ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम गेरार्ड डीलुफू लाजोजो हुन्। Gerard Deulofuu को रूप मा उनको प्रायः बुलाया जान्छ 13th मार्च 1994 मा उनको आमा, मारिया जेस्सु लाजारो र पिता, मार्सेल डीलुफू को Riudarenes को स्पेनिश गाँउ मा पैदा भएको थियो।
गेरार्ड शुद्ध स्पेनी मूलको हो, यसको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूले क्यालोलोडोका जराहरू राखेका छन् जुन एफसी बार्सिलोनाको जातीय घर हो।
Gerard Deulofeu परिवार मूल। एटलस र बुटको क्रेडिट
यो स्पेनिश क्षेत्रमा लगभग 7.5 लाख मानिसहरूको कुल जनसंख्या छ, स्पेनको कुल आबादीको 16% र स्पेनको क्षेत्र एटलस र बूटहरूको 6.3% (32,114sq किमी) भन्दा बढी लेखांकन गर्दछ।
मिडिया रिपोर्टको अनुसार, युवा डुलौफले आफ्नो आमाबाबुसँग कुनै भाइ वा बहिनीको साथ एक्लै पनी। तथापि, एक फुटबल-मायालु पिताले यो फुटबलको सुन्दर खेलको लागि मात्र प्राकृतिक रूपमा बनाइदिनु भएको छ बच्चाको रूपमा उसलाई।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जवान डुलौौले आफ्नो गाउँको मैदानमा देशी केटाहरूसँग खेल्न थाले। डेलीमेलको अनुसार, उनले उनीहरूलाई आफ्नो अंक बदल्दै आत्मविश्वास र बानी बसाल्दै, फुटबल बलहरू संग नीलो चीजहरू बाहिर।
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या क्यारियर बिल्डअप र शिक्षा
लिभरपूल इकोनको अनुसार, 1990s को समयमा दिउँसो, Riudarenes को निद्राको क्यालोलोनियन गाँउ नियमित रूप देखि भंग गर्न को लागी शोर, तोडने गिलास र मारिया जेस्सु लाजोजो को एक विवाहित आमा को किनारों देखि परेशान हुनेछ।
ड्युल्फियसको पारिवारिक घर भित्र, जेरार्डको एक जवान जहिले पनि सधैँ, दाहिने र केन्द्र छोडिने फुटबलहरू हेर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ, उनी गाँउ पिचमा आफ्ना बुबा र साथीहरूसँग खेल्थे।
यस्तै जीवनसाथीले डुलौफू प्रारम्भिक वर्षमा। क्रेडिट Sarasota Herald-Tribune
युवा जेरार्डले आफ्नो समय अझ धेरै खर्च गरे पारिवारिक कोठामा आफ्नो प्रतिभा को सम्मान गर्थे। जेरार्डले एक पटक आफ्नो बचपन अनुभवको बारेमा भने;
"म मेरो बुबासँग गाँउ पिच र मेरा मित्रहरूसँग अभ्यास गर्न जान्छु। तर मेरो घर मा, म शायद 10 गेंदहरु र बूम थियो, उछाल, संधै। "
फुटबल शिक्षाको निर्णय:
पहिले नै हेरिएको जस्तो, Gerard Deulofuu को आमाबाबु मध्ये एक (उनको आमा) आफ्नो बस्ने कोठा मा आफ्नो छोरा फुटबल एस्केपडी संग धेरै खुशी थिएन। यसैले एक निर्णय उनको द्वारा बनाईएको थियो किनभने उनको छोराले घर को घर मा उनको इनडोर शूटिंग अभ्यास संग हड़ताल को बिरुद्ध जारी राखयो।
उनको पतिको समर्थनमा मारिया जेस्सु लाजारोले जेरार्ड जवानलाई नजिकैको फुटबल अकादमी, पेन्नी बन्स वायुसेन्सलाई बिस्कुट गर्ने निर्णय गरे। उनले त्यहाँ परीक्षामा भाग लिइन्, फ्लाइट रङहरू पारेर युवा टोलीको सदस्य बने।
पेन बन्स एयरससँग युवा जर्जर्ड डीलुफू। चितवनबाट बाहिर निस्कियो। Instagram को क्रेडिट
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
तीन वर्ष (2001- 2003) को लागि पेन्नी बन्स वायुसेना खेल्न पछि, जेरार्डको दृष्टान्तले तिनलाई नामांकन र बार्सिलोनाको प्रसिद्ध ले मसिया अकादमी संग परीक्षण गर्ने गुनासो गरे।
ली Masia मा Gerard Deulofu को शुरुवात जीवन। फुटबलप्लेयरहरू
बिना असम्भव, एफसी बार्सिलोनाका ले मिया अकादमीमा हरेक बालबालिकाको सपना देख्न सकिन्छ। त्यसोभए, यो जेरार्ड जवानको लागि रमाइलो थियो किनभने उनी धेरै बलि चढाउँथे। त्यहाँ उनीहरूले जन्मदिन पार्टनरहरूलाई सम्झना गर्थे वा केही चीजहरू स्कूलमा जान लागेका थिए। तर फ्लिप पक्षमा, जवान जारर्डले वास्तवमा माया गर्ने केहि गर्न चाहन्थे।
Gerard Deulofeu Early Life Story। Instagram को क्रेडिट
Gerard Deulofuu ले सबैभन्दा धेरै समय ले ली Masia संग आफ्नो प्रतिभा honing। उनले परिपक्व गर्न थालेपछि, आफैले आफैंलाई अकादमी संग राम्रो तरिकाले सुने र उमेर समुहहरु को माध्यम ले सुर्खेत प्रगति को देख्यो। यस्तो प्रगतिले उहाँलाई प्रक्रियामा जवान नेता बन्ने देखिन्छ।
जेरार्ड डीलौफु एक पटक कप्तान र नेता थिए
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या सडकको प्रसिद्धि कथा
2011 वर्ष उमेर जेरर्डो बार्सिलोनामा भएको थियो। बेलायतमा उनले उत्कृष्ट प्रविधि र क्षमता देखाए। क्षणहरू जुन जूनियर रैंक्सहरूमा सबैभन्दा प्रत्याशित खेलाडिको रूपमा उभिएका थिए।
बार्सिलोनाको साथ Gerard Deulofuu सफलता एफसी बार्सिलोना.
27 लक्ष्यहरु मा 67 लक्ष्यहरु स्कोरिंग जवान जर्जर्ड ने एन कैम्प को अधिक देखि अधिक उच्च अपेक्षाहरु लाई जीवित देख्यो। यो विशेषताले उनलाई FC FC Barca पहिलो टोलीमा बढायो।
बर्का वरिष्ठ टीमको साथमा, जर्जर्ड जवानले यो निरन्तर दबावलाई स्थिति प्रतिद्वंद्वी भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्न लगाए- डेविड विला र पेडोरो रोड्रिजुज। दबाबलाई सम्हाल्न सक्षम हुनाले उहाँलाई Everton को ऋणमा पठाइयो।
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
Gerard Deulofeu प्रसिद्धि स्टोरीमा उठाउनुहोस्। डेडपिनको क्रेडिट
एभटनको गुडिसन पार्क एक किशोर डीलौफुको लागि परिष्करण विद्यालयको रूपमा देखा पर्यो। यद्यपि उनी अन्य क्लबहरू (सेलिला, एसी मेलन) खेती गरिएका थिए जसले उनलाई फुटबल कार्य अनुभव प्राप्त गर्यो। आफ्नो फारम पत्ता लगाउन पछि, डुलौफ फिर्ता प्रीमियर लीगमा गए।
डिल्भौउले अन्ततः अधिक छाया पार्यो वाटफोर्ड जसको रूपमा लेखिएको समयले क्लबको आध्यात्मिक नेताको साथ फर्मिड साझेदारी गर्दछ ट्रय डीनी.
Gerard Deulofeu र ट्रय Deeney प्रसिद्धि स्टोरी। Zimbo लाई क्रेडिट गर्नुहोस्
गेरार्डले उनको विजेता विजार्डरीको लागि सधैँ सम्झना पाउनेछ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या सम्बन्ध जीवन
त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन कि जेरार्ड डीलौफूको वफादारी, कडा परिश्रम र नम्रता सहितको प्रिय गुणहरूले उनलाई महिलाहरु लाई दाखिल दाख बनाउन सक्दैनन्।
सफल फुटबलरको पछाडि मार्य भिल्चको सुन्दर व्यक्तिमा ग्लैमरस प्रेमिका अवस्थित छ।
Gerard Deulofeu र मारी विल्च। स्पैनिशविग्सन्डकिडलाई क्रेडिट गर्नुहोस्
उनीहरूको जस्तो देखिन्छ, तपाईले अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ, डुलौफु थोपा पुरानो हुनुपर्छ। वास्तवमा, मिरी विल्चको जन्म 8 जूनको XNumXth दिनमा भयो। यसले उनीहरूको 1992 वर्ष भन्दा पुरानो वर्ष भन्दा पुरानो हो।
मरिरासँग क्यारार्र्डजस्तै कातालान परिवारको उत्पत्ति छ। उनीसँग एउटै पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि छ। तिनको मानिस जस्तै, तिनी कातालान, स्पेनिश र अंग्रेजी बोल्छन्।
एक साथ, दुवै प्रेमीहरू, जेरार्ड र मारी आमाबाबु उनीहरूको मनमोहक छोरा बेटीमा लेख्छन् जसको नाम अज्ञात छ कि लेखनको समयमा।
Gerard Deulofuu परिवार क्रेडिट Tumblr
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या व्यक्तिगत जीवन
जेरार्ड डीलौफूको व्यक्तिगत जीवन जान्नको लागी तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
Gerard Deulofeu व्यक्तिगत जीवन। Instagram को क्रेडिट
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति ओबामाले भने, "उनीहरूले कुनै पनि कुरालाई नबिर्सने बताए। Gerard Deulofuu को उपस्थिति केहि ऊर्जा र अस्थिरता को शुरूआत गर्दछ। उनको शुरुआती क्यारियर डेभलपमेण्ट डेल्भूले साबित गरेको छ कि उनीहरूले आफ्नो क्षमताको बारेमा साहसी, दृढ र भरोसा राखेका छन्। जेरार्ड भनेको हो जसले भविष्यबारे सोचेको छैन। स्पानीर्डको अनुसार;
"भविष्य? मलाई थाहा छैन। म बस हरेक दिन र हरेक मिडिया फोकस गर्न चाहन्छु र मेरो सबैभन्दा राम्रो फुटबल खेल्छु। यदि तपाइँ भविष्यमा सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ कुन तीनमा चाहनुहुन्छ भने, चार महिना, मलाई लाग्छ तपाईंको टाउको पागल छ। त्यसैले सर्वोत्तम [बाटो] आज फोकस गर्न र तपाईंको उत्तम बजाउनको लागि हो। "
अन्ततः उनको व्यक्तिगत जीवनमा, जेरार्ड एक मायालु पिता हो जसले आफ्नो छोरीलाई एक खजाना र उनको भित्री शान्तिको साँचो स्रोत हो।
Gerard Deulofeu र बेटी। Instagram को क्रेडिट
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या पारिवारिक जीवन
Gerard Deulofuu एक कातालान गाँउमा र एक स्पेनिश शहर वा शहर होइन मा उठाइयो। यो तथ्यले उनीहरूको विनम्र सुरुवात र पारिवारिक मूललाई ​​उदाहरण दिन्छ। देवौफूको घरको सबै सदस्य स्पेनिश भाषाको साथ कातालान भाषा प्रयोग गर्छन्।
लेखन को समयमा, जेरार्ड डीलौफू को आमाबाबु एक निजी र सुखी जीवन जीना जानिन्छ। ड्युल्फूले आफ्नो जाग र पिताको लागि सार्वजनिक मान्यता खोज्न नचाहनु भएको हो। उहाँका भाइबहिनीहरूबारे जानकारी एक गोप्य छन्।
आज, डूलोफस द्वारा बनाएको बलिदानले आगामी फुटबलरहरु रयुदेननेज र इजरायलको स्पेनिश गाउँबाट प्रेरित गरेको छ।
Gerard Deulofeu परिवारको उत्पत्ति। Riudarenes को गाँउ। क्रेडिट गर्न बुकिङ
विकिपीडियाको अनुसार, Riudarenes स्पेन, Girona प्रांत मा स्थित एक गाँउ हो। गाँउले 47.6 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र समाविष्ट गर्दछ र 2014 मा जनसंख्या 2,148 थियो। डुलौफू सहित Riudarenes भन्दा धेरै बासिन्दाहरू धर्मद्वारा मसीहीहरू हुन्।
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या LifeStyle
लेखन को समय को रूप मा, स्थानांतरण मार्केट रिपोर्ट को आधार मा, जेरार्ड डीलौफू मा £ 16.20m को वर्तमान बजार मूल्य छ र उनको नाम मा एक £ 60,000 साप्ताहिक वेतन छ।
एक लाखपतिले ड्युलोफुको लागि ग्लैमरस लाइभ लाइभलाई पारित गर्दैन। उहाँका विनम्र शुरुआतले उहाँलाई सिकाउनुभएको छ उनीहरूको फुटबल पैसाको प्रबन्ध गर्ने बारेमा स्मार्ट। यो पागलपन जस्तो बिताउँदैन, वा आफ्नो जीवन शैली परिवर्तन गर्दैन।
Gerard Deulofeu LifeStyle तथ्य। Zimbo लाई क्रेडिट गर्नुहोस्
जेरार्ड डीलौफूको प्रसिद्धिको सामना गर्ने क्षमताs आफ्नो अनुपात को लागि आनुपातिक रूप देखि उनको फुटबल मा केंद्रित छ।
Gerard Deulofeu बालबालिकाको हत्या अनियमित तथ्यहरू
उहाँका कुकुरहरूको प्रेम
Gerard Deulofu's Dogs क्रेडिटको लागि फुटबलबबल
सायद तपाईंले आफ्नो पाङ्ग्राहरूलाई प्रेम देखाउने धेरै फुटबल खेलाडीहरू देख्नुभयो। Gerard Deulofuu एक अपवाद छैन। यद्यपि त्यहाँ एक भन्न सकिन्छ कि आधुनिक खेलमा कुनै वफादारी बाँकी छैन। यसले रिसार्ज गर्न सक्दैन
Gerard Deulofou र उनको कुकुरहरूको बीचमा तिनीहरूका नामहरू शेरिरी र लुकासहरूमा जान्छन्।
तपाईंलाई थाँहा थियो?…
वर्ष जेरार्ड डीलौफु उत्पन्न भएको थियो (1994) निम्न घटनाहरू थिए;
(i) तीन शताब्दीका सेतो शासन पछि नेल्सन मन्डेला दक्षिण अफ्रिकीको पहिलो कालो राष्ट्रपति बने।
(ii) याहू र अमेजन दुवैको स्थापना पछि 1994 मा इन्टरनेट प्राप्त भयो। मानिसहरू हजारौं माइल अजनबीहरूलाई कुराकानी गर्न सकेका थिए र किताबहरू किन्न सकेनन्। (iii) अन्ततः, वर्ष 1994 ले प्लेस्टेशन सुरू गरे।
गारर्ड डेल्भौउ बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Gerard Deulofeu बचपन कथा र प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
वाटफोर्ड फुटबल डायरी
परिमार्जित मिति: मे १,, २०१ 9
बोजान क्रिकिक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Paco Alcacer Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य